Guddoomiyaha KULMIYE oo ka hadlay khasaare ka dhashay Roobab da’ay, baaqna u jeediyay Xukuumadda | Somaliland247's Blog
Guddoomiyaha KULMIYE oo ka hadlay khasaare ka dhashay Roobab da’ay, baaqna u jeediyay Xukuumadda
Filed under: NEWS — somaliland247 @ 5:46 am
Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa Xukuumadda ugu baaqay inay qorshe ka yeelato khasaarooyin kala duwan oo ay keeneen Roobab ka da’ay deegaano Somaliland ka tirsan.
Guddoomiyaha ayaa Warsaxaafadeed uu maanta ka soo saaray magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay khasaare ay keeneen Roobab ka da’ay deegaano ka tirsan deegaannada Somaliland qaarkood.
“Sidaynu wada ognahay waxaa bilowday raxmaadkii roobka gu ga, ilaahayna aynu ugu shugri naqayno, maadaama uu inaga soo jabiyey abaartii baahsanayd ee guud ahaan ka jirtay Somaliland.
Roobabkaasi oo khasaare gaadhsiiyey magaalooyinka Berbera iyo Wajaale, waxaanay waxyeeleeyeen goobo kala duwan oo ku yaala Magaalooyinkaas.
Haddaba, Xisbiga KULMIYE waxaanu ka tacsiyadaynaynaa khasaaraha naf iyo maalba leh ee soo gaadhay magaalooyinka Wajaale iyo Berbera. Sidaa darteed, Xisbiga Kulmiye waxa uu ugu baaqayaa Xukuumadda Somaliland, Dawlaha Hoose iyo dhamaan Hay’adaha Caalamiga ah inay u gurmadaan sidii wax looga qaban lahaa khasaaraha soo gaadhay magaalooyinkaas.
Xisbiga KULMIYE wuxuu u soo jeedinayaa, kuna talinayaa Xukuumada Somaliland inay qorshe habboon ka yeelato waxyeelooyinka sida caadiga ah roobabku soo gaadhsiiyaan Magaalooyinka Somaliland, sida daadadka galay Bakhaaradda Wajaale iyo Maxjarka Xoolaha ee Berbera.
Ugu danbayntii, Waxaanu kula talinaynaa Xukuumadda Somaliland in la Sameeyo qorshe lagaga faa’iidaynayo biyaha roobabka ee sanad walba iyagoo qulqulaya badda toos u taga, dadweynahana waxaanu ku boorinaynaa inay xoogga saaraan sidii ay u kordhin lahaayeen wax-soosaarkooda dalaga beeraha, iyagooka faa’iidaysanaya roobabka. Bulshow aynu isku tashano, nimaan dhididini ma dhargee.”